LA GRANDE BRADERIE DE MADAGASCAR :: Hanentana ireo mpiantsena ry Mr Saida sy Arion Joy • AoRaha
LA GRANDE BRADERIE DE MADAGASCAR Hanentana ireo mpiantsena ry Mr Saida sy Arion Joy
Faradoboka amin’ity andiany ity. Anio sy rahampitso sisa ny fotoana hahafahan’ireo mpiantsena manararaotra ny fihenam-bidy 15% farafahakeliny, ao amin’ny « La Grande Braderie de Madagascar », etsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina Mahamasina. Mpanakanto malaza roa no hanentana ireo mpiantsena mandritra izany.
Anio sabotsy no hanao fampisehoana ho fanentanana ireo mpiantsena i Mr Saida. Amin’ny alahady kosa no anjaran’i Arion Joy. Isan’andro ihany koa DJ Ceymci no hamalifaly ireo mpitsidika. I Jasmine, indray no hampiala voly sy hampihanta ireo ankizy kely miantsena miaraka amin’ny ray aman-dreniny, amin’ny alalan’ny kilalao maro samihafa.
Somary nangingina ny roa andro voalohany tamin’ity hetsika ity. “Tsikaritra fa tena manahiran-tsaina ny olona ny fanomanana ny fidiran’ny mpianatra. Misy akony eo amin’ny tsena izany. Misy amin’ireo mpandray anjara no tena sahirana amin’ny fivarotana ny entany. Na izany aza tsy kivy izy ireo satria amin’izao roa andro farany izao dia maro amin’izy ireo no hanohy ny varo-boba, ho fitsinjovana ny mpanjifa”, hoy Andrianasolo Hery, tompon’andraikitry ny varotra eo anivon’ ny Mada Vision, mpikarakara ny La Grande Braderie.
Ankoatra ny hetsika ara-kolontsaina, dia entana maro, toy ny fitaovam-pianarana, fitafiana, kojakoja an-dakozia, kojakojan’ ny fiara, sakafo,… no hita amin’ireo tranoheva. Orinasa maro rahateo no mpanohana, izay manao fihenam-bidy ihany koa,toy ny Salone, Open Flex, Star (Fresh), Cassy Boutique, Master Immo, Impec ary ny Alo taxi’nakà.
Tetikasa Tanà-Masoandro Andrandrain’ny tompon-tany ny famoahanany tetibidin’ny fanonerana
Hosoka Dimy lahy voasambotratratra nanaparitakavola sandoka
Tsy fandriampahalemana Sesilany ny asan-jiolahy any Ambano
KITRA – «TELMA COUPE DE MADAGASCAR» :: Hihaona fanintelony amin’ny famaranana ny Elgeco Plus sy AS Adema
BAOLINA KITRA – «CAN 2019» :: Tsy hisy ny fiaramanidina manokana ho an’ny Barean’i Madagasikara